Ụbụrụ Brain: usoro nkwụghachi ụgwọ na-eme ka omume anyị dị Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi Ụgwọ Ọrụ
Iji ghọta ihe kpatara nri siri ike anyị, ịhụnanya ịhụnanya, ọchịchọ mmekọahụ, mmanya, heroin, foto ndị gba ọtọ, chocolate, ịgba chaa chaa, mgbasa ozi ọha na eze ma ọ bụ ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ dị anyị mkpa ịmara banyere usoro ịkwụ ụgwọ.
The usoro nkwụghachi ụgwọ bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa n'ụbụrụ. Ọ na - eme ka omume anyị ghara ịnụ ụtọ ihe dịka nri, mmekọahụ, mmanya na ihe ndị ọzọ. Ọ na - emekwa ka anyị ghara ịta ahụhụ (esemokwu, ọrụ ụlọ, wdg) chọrọ ike ma ọ bụ mbọ karịa. Ọ bụ ebe anyị na-enwe mmetụta ma na-edozi mmetụta ndị ahụ ịmalite ma ọ bụ kwụsị ọrụ. Ihe mejuputara ya bu nkpuru aru nke ụbụrụ. Ha na-atụle ma ọ ga-emeghachi omume ma meghachi omume. Rewardgwọ ọrụ bụ ihe mkpali na-akpali agụụ mmekọahụ ịgbanwe omume. Wardsgwọ ọrụ na-abụkarị ndị nkwado. Nke ahụ bụ, ha na-eme anyị ka anyị na-emeghachi omume anyị na-ahụ (amaghị ama) dị mma maka nlanarị anyị, ọbụlagodi mgbe ha adịghị. Obi ụtọ bụ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ mkpali ka mma karịa mgbu maka omume na-akpali akpali. Karọt dị mma karịa osisi wdg.
N'etiti etiti usoro nkwụghachi ụgwọ bụ striatum. Ọ bụ mpaghara ụbụrụ na-emepụta mmetụta nke ụgwọ ọrụ ma ọ bụ obi ụtọ. Na arụ ọrụ, striatum na-ahazi ọtụtụ akụkụ nke iche echiche na-enyere anyị aka ime mkpebi. Ndị a gụnyere imegharị ihe na ime atụmatụ, nkwalite, mkwado, na nghọta nkwụghachi ụgwọ. Ọ bụ ebe ụbụrụ na-atụle uru nke ihe mkpali na nanosecond, na-ezipụ 'gaa maka ya' ma ọ bụ 'pụọ'. Akụkụ ụbụrụ a na-agbanwe n'ụzọ dị ịrịba ama n'ihi omume riri ahụ ma ọ bụ nsogbu ị abuseụ ọgwụ ọjọọ. Àgwà ndị na-abanyekarị miri emi bụ ụdị mmụta mmụta 'enweghị nchịkwa', nke anaghị achịkwa achịkwa.
Nke a bụ okwu TED na-enye aka maka isiokwu nke Achọpụta Ụtọ.
Ọrụ nke Dopamine
Kedu ọrụ nke dopamine? Dopamine bụ neurochemical nke na-akpata ọrụ na ụbụrụ. Ọ bụ ihe usoro ụgwọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ọ nwere ọrụ dị iche iche. Dopamine bụ 'go-get-it' neurochemical nke na-akpali anyị ịmalite ma ọ bụ ụgwọ ọrụ na omume anyị chọrọ maka nlanarị. Ihe omuma atu bu nri, mmekorita nwoke na nwanyi, nkwekorita, izere ihe mgbu wdg. Dịka ọmụmaatụ, ndị nwere ọrịa Parkinson anaghị edozi dopamine zuru ezu. Nke a gosipụtara dị ka mmegharị anya. Ugboro ugboro ugboro nke dopamine 'na-ewusi' ụzọ ike iji mee ka anyị chọọ ịmeghachi omume. Ọ bụ isi ihe na-eme ka anyị mụta ihe ọ bụla.
Ọ bụ nke ọma nke ọma na ụbụrụ na ụbụrụ. Ozizi bụ isi gbasara ọrụ dopamine bụ ume-nju tiori. Ọ bụ maka ịchọ, ọ bụghị inwe mmasị. Mmetụta nke obi ụtọ n'onwe ya sitere na opioids ndị sitere na ụbụrụ na -emepụta mmetụta nke ọ aụ ma ọ bụ dị elu. Dopamine na opioids na-arụ ọrụ ọnụ. Ndị mmadụ nwere ọgụgụ isi nwere oke mmepụta nke dopamine na nke a nwere ike ibute oke ifufe nke uche na oke mmetụta. Chee Goldilocks echiche. Nguzozi. Ụbiga nri ókè, mmanya na-aba n'anya, ọgwụ ọjọọ, egwu porn na-eme ka ụzọ ndị ahụ sie ike ma nwee ike ị toụ ọgwụ ọjọọ na ụfọdụ.
Mkpụrụ obi na ihe ụtọ
Ọnụ ọgụgụ nke dopamine nke ụbụrụ na-ezipụ tupu omume eme ihe dị oke mkpa maka inye obi ụtọ. Ọ bụrụ na anyị enwee obi ụtọ na ihe ma ọ bụ ọrụ, ebe nchekwa a pụtara pụtara na anyị ga-eche na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ọzọ. Ọ bụrụ na ihe mkpali ahụ mebiri ọdịnihu anyị - ọ na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-adịghị atọ ụtọ - anyị ga-emepụta dopamine ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa na oge ọzọ anyị ga-enweta ihe mkpali ahụ. Ọgwụ ọjọọ na-agbagha usoro ụgwọ ọrụ ma na-emepụta ọkwa dị elu nke dopamine na opioids na mbido. Mgbe ụbụrụ na ụbụrụ na - eji ihe mkpali ahụ eme ihe, ya mere, ọ dị mkpa inwe nkwado nke dopamine iji nweta elu. Iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, onye ọrụ chọrọ otu ihe ahụ, ma na porn dịka mkpali, ụbụrụ chọrọ ihe ọhụrụ, dịgasị iche na ihe na-awụ akpata oyi ma ọ bụ ihe ijuanya iji nweta elu.
Onye ọrụ na -achọ ncheta na ahụmịhe nke mbụ euphoric dị elu, mana ọ na-agwụkarị na ndakpọ olileanya. Enweghị m ike ịnweta…. Afọ ojuju. Onye ọrụ nwekwara ike, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, 'chọrọ' porn ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ sịga, iji nọrọ n'isi nke ihe mgbu nke obere dopamine na mgbaàmà iwepụ na-akpata. N'ihi ya, ajọ usoro nke ịdabere. N'ime onye nwere ihe eji eme ihe ma ọ bụ ịdabere na omume, 'mkpali' iji, kpatara site na-agbanwe ogo nke dopamine, nwere ike ịdị ka mkpa 'ndụ ma ọ bụ ọnwụ' na-eduga na mkpebi na-adịghị mma iji kwụsị ihe mgbu ahụ.
Isi Iyi nke Dopamine
A na-emepụta isi iyi dopamine na mpaghara ụbụrụ a (striatum) na mpaghara ventral tegmental (VTA). Mgbe ahụ, ọ na-aga na nkwonkwo accumbens (NAcc), ụlọ ọrụ nkwụghachi ụgwọ, na nzaghachi maka nhụjuanya / atụmanya / ụgwọ ọrụ nke ụgwọ ọrụ ahụ, na-ebute ihe na-akpalite njikere maka ime ihe. Omume na - esote - ọrụ moto / mmegharị, nke ihe mgbaàmà na-arụ ọrụ 'gaa nweta ya,' ma ọ bụ ihe mgbaàmà na-egbochi ya, dị ka 'nkwụsị', ga-ekpebi site na mgbaàmà sitere na cortex mbụ mgbe ọ mechara ozi ahụ. Otutu dopamine enwere n'ime ugwo olu, karia ihe mkpali ahu dika ugwo. Ndị nwere nsogbu omume na-enweghị nchịkwa, ma ọ bụ ihe riri ahụ, na-emepụta mgbaàmà na-esighi ike site na cortex mbụ iji gbochie ọchịchọ ma ọ bụ ime ihe ọkụ ọkụ.
<< Neurochemicals Nwa ntorobịa >>